Costa Rica: Sarimihetsika Nasionaly nahazo tamberina tsara · Global Voices teny Malagasy
Costa Rica: Sarimihetsika Nasionaly nahazo tamberina tsara
Voadika ny 24 Jona 2019 22:03 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny 2 septambra 2008)
Nisy tadiom-pamokarana haino aman-jery lehibe nanozongozona ny fahalianan'ny mpijery tamin'ity taona (2008) ity tao Costa Rica. Samy nanome ny eritreriny amin'izao tolotra ara-tsinema vaovao izao ireo bilaogeran'i Costa Rica.
Nahazo tamberina miabo avy amin'ireo manampahaizana manokana sy ireo mpijery amin'ny ankapobeny manokana i Miguel Gomez sy ny filmany mitondra ny lohateny hoe El Cielo Rojo (Ny lanitra mena) izay nisokatra tamin'ny fanombohan'ny volana aogositra. Cristian Cambronero avy ao amin'ny Fusil de Chispas [es] izao namoaka tamberina fohy fa efa amin'ny antsipirihany tamin'ny fivoahana voalohany tamin'ny El Cielo Rojo tao amin'ny blaoginy:
varios diálogos brillantes, absolutamente creíbles para nosotros, su público meta, los espectadores costarricenses. Yo, y estoy seguro que le pasará a muchísimos de quienes la vean, me reconocí a los 17 años en muchas secuencias, y mi mamá, y a mi abuela, y a las vecinas.
Miguel namorona lahatsora-tsarimihetsika mamirapiratra, tena azo inoana ho anay mpijery Kostarikana mpijery azy. Izaho izao (ho an'ireo maro hafa izay hijery ny filma) mahita ny tenako tamin'izaho 17 taona any amin'ireo sehatra sasantsasany, (toy ny) mahita ny reniko, ny renibeko ary ny sasantsasany amin'ireo mpifanolo-bodirindrina ihany koa aho.
Sombiny amin'ny El Cielo Rojo
Nisy tale mpanatontosa iray hafa ihany koa, Isthar Yashin, vao nandray anjara tamin'ny sinema nasionaly tamin'i El Camino (Ny Lalana) izay nahazo loka lehibe maro sy fiaikena avy amin'ny fetiben'ny filma vahiny. Nahazo aingam-panahy tamin'ny hafatra tian'i El Camino ampitaina, nanoratra toy izao i Sergio Pacheco avy ao amin'ny La foto salió movida [es] writes:
Tahaka ny mahatsapa tena ho mpifindramonina eto an-tanindrazako hatrany aho. Teraka tany ambanivohitra aho ary efa ho folo taona lasa izao no nonina an-tanandehibe aho (raha antsoina ho isan'izany i San Jose). Maro amintsika no mivezivezy manerana ny firenentsika, mitety firenena maro, tontolo maro, ao anatin'izao tontolo izao sy ny anona iraisana amin'izany fivezivezena izany dia ny fitadiavana. Samy manana ny valiny ho azy avy ny tsirairay, ary ho ahy ilay izy tsy hisy idiran'ny mandresy-resy velively, fa ho resaka fiavota-tena, izay mifindrafindra hatrany.
Sombiny amin'ny El Camino
Na i Gomez na i Yashin dia samy mikendry ny hanoritsoritra ny toetra manavaka ara-kolontsaina sy voatondro mazava izay heverina ho ao anatin'ny natioran'ny tsy ny Kostarikana ihany fa ny mponina rehetra ao Amerika Afovoany.
Mbola tsy tapitra ny lanonana. Tamin'ny herinandro ny Bisonte Producciones nanolotra fanasana amin'ny endrika fetiben'ny filma roa andro izay mandranty ireo karazana filma fohy vokarin'ny mpianatra sy ny mpankafy ny ankamaroany fa nanintona ny famokarana haino aman-jery iray manontolo ny fiainana, ny fakana sary an-tsaina ary ny zavamisiny. Mametraka hatrany ny fivelaran'ny fanehoana artistika izay maneho ny haren-kolontsaina eo amin'ny fomba fisaina, fahatsapana ary ny fanaovana hatrany i Amerika Latina. Tsy isalasalana fa vao fanombohana fotsiny izao.